Madaafiic Caawa Lagu Garaacay Saldhig ay Ciidamada AMISOM ku Leeyihiin Degmada Balcad – Heemaal News Network
Madaafiic Caawa Lagu Garaacay Saldhig ay Ciidamada AMISOM ku Leeyihiin Degmada Balcad
Wararka ka imanaya degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in tiro hoobiyaal ah ay ku soo dhacday meel aan ka fogeyn saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin degmada Balcad.
Saddex ruux oo isku qoys ah oo degen xaafada Xaawo Taako ee ka mid ah xaafadaha degmada balcad ayaa waxa ay ku dhaawacmeen kadib markii gurigooda uu ku soo dhacay hoobiye waxaana la dhigey isbitaal ku yaal degmada Balcad.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in ugu yaraan afar hoobiye lagu soo tuuray saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiinmeel ku dhow warshadii hore ee dharka Balcad iyadoo saddex ka mid ah ay ku dhaceen meel banaan ah halka mid kale uu ku dhacay guri ay qoys rayid ah degenaayeen.
Guud ahaan ammaanka degmada Balcad ayaa aad loo adkeeyay iyadoo dhowaan ay fariisimo ka sameysteen ciidamo Milatari ah degmada Balcad waxaana soo baxayay warar sheegaya in dhaqdhaqaaq ciidan uu ka jiro degmada Balcad.
Deegaanada dhaca dhinaca galbeed ee degmada Balcad ayaa waxaa ku sugan xoogag ka tirsan Al-Shabaab,deegaanka Basra ayaa waxaa ka furan maxkamad loogu kala garqaado dadka degen degmada Balcad.
2-dii bishii March ee sanadkan ayaa xoogag ka tirsan Al-Shabaab waxa ay muddo saacado ah la wareegeen qeybo ka mid ah maamulka degmada Balcad.
Hindiya Oo Deeq Dawo Iyo Lacag Iskugu Jirta Ku Wareejisay Dowladda Somalia.(Sawiro)
Xisbiyada Mucaaradka Oo War kasoo Saaray Baaqii Madaxweyne Farmaajo Ee Cunaqabateynta Eritrea
Al-Shabaab Oo la Wareegay Deegaano Hoos Taga Degmada Balcad.
Xaalad cabsi ah ayaa ka taagan degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, kaddib markii dagaalamayaasha Shabaab ay la wareegeen deegaano hoos-taga degmadaas. Wararka ayaa sheegaya in dagaalamayaasha Shabaab la wareegeen deegaano hoos-taga degmada Balcad oo […]
Askar Ku Dhimatay Qarax Miino Oo Lala eegtay Gaadhi Ay Saarnaayeen Oo Maraayey Duleedka Magaalada Balcad
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax Xoogan oo inta udhexeysa Balcad iyo Jowhar lagula eegtay Gaari ay saarnaayeen Ciidamo katirsan Dowladda Somaliya. Qaraxa oo jugtiisa laga maqlay qeybo badan oo kamid ah Sh.Dhexe […]
Kooxda Alshabaab Oo Dib Uga Baxay Deegaano Ay Saaka ka Qabsadeen Degmada Balcad.
Wararka ka imanaya deegaano ka mid ah degmada Balcad ee gobolka Shabeelada dhexe ayaa sheegaya inay Alshabaab dib uga baxeen deegaano ka mid ah degmada Balcad oo ay saaka la wareegeen. Wararka ayaa waxa ay […]